Kudhawaad 10 Askari oo Afrikan ah oo ku dhintay Qarax ka dhacay Cabriska. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On May 16, 2019 589 0
Qarax xoogan oo shalay ciidamada Shisheeyaha lagula eegtay deegaanka Carbiska ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa ku gaaray khasaare culus.
Warar la helayo ayaa xaqiijinaya dhimashada 8 askari oo katirsan ciidamada Shisheeyaha, kuwaas oo saarnaa gaariga la qarxiyay, waxaana sidoo kale bas beelay gebi ahaanba gaariga, sida uu xilli hore warbaahinta u xaqiijiyay Sheekh Cabdil-caziiz Abuu Muscab.
Taliska ciidamada Shisheeyaha ayaa ka gaabsaday ka hadalka khasaaraha kasoo gaaray qaraxan, waxaana inta badan ciidamada Afrikaanta ay la kulmaan weeraro qaraxyo ah xilliyada ay isaga kala gudbayaan deegaannada iyo degmooyinka ay duulaanka ku joogaan.
Qaraxan khasaaraha dhaliyay ayaa kusoo aadaya xilli dhawaan sheekh Mahad Warsame Abuu Cabdi-raxmaan uu faray ciidamada Mujaahidiinta iney aad u kordhiyaan weerarada qaraxyada ah oo uu sheegay in Shisheeyuhu ay aad ugu naafoobeen.
Dhinac kale, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada maamulka Koonfur-galbeed ku leeyihiin degmada Qansaxdheere ee gobolka Baay.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa weerar dhowr jiho ah ku kediyay ciidamada maamulka Koonfur-galbeed, kuwaas oo markii dambe goobta ka cararay.
Wararka kusoo dhacay warqabadka Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ayaa xaqiijinaya in 7 askari oo katirsan ciidanka la weeraray ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen, halka laga furtay dhowr qori oo nooca AK47 ah.